Digital Twin - BIM + GIS - teny izay re tao amin'ny Konferansa Esri - Barcelona 2019 - Geofumadas
Digital Twin - BIM + GIS - teny izay re tao amin'ny Konferansa Esri - Barcelona 2019
May, 2019 ArcGIS-ESRI, fanavaozana
Geofumadas dia nandrakotra hetsika maromaro nifandraika tamin'ity lohahevitra ity; Nofaraninay tamin'ny 2019 ity tsingerin-taonan'ny 25 ity, miaraka amin'ny mpanatrika ny Fihaonambe mpampiasa ESRI any Barcelona - Espaina, izay natao tamin'ny Aprily XNUMX tao amin'ny Institute of Geology and Cartography of Catalonia (ICGC).
Mampiasa ny tenifototra #CEsriBCN, ao amin'ny kaonty twitter Nanolotra fandrakofana mivantana an'ity hetsika ity izahay, ankoatra ireo solontenan'ny Esri Spain, dia afaka nahita ny mpikaroka, ny mpisehatra amin'ny andrim-panjakana ary ny orinasa izay mampiasa rindrambaiko amin'ity marika ity izahay izao. Modesto, raha oharina amin'ny hetsika hafa izay efa nandraisantsika anjara teo aloha, ity hetsika ity dia tsy nisy dikany tamin'ny fandaminana, natao ho laharam-pahamehana amin'ny fampisehoana sy mpanolotra. Amin'ny ankapobeny, ny fandaharam-potoana dia nizara ho tabilao boribory 2 miaraka, ny plenary sy ny fihetsiketsehana mifantoka amin'ny vaovao ArcGIS Enterprise, ny fiaraha-miasa amin'ny SAP, AutoDesk ary Microsoft.
Eto ambany eto dia mamintina ireo lafiny izay nisarika ny sainay ny ankamaroan'ny fomba fanao amin'ny Geo-engineering.
Amin'ny hoavy dia hiara-hiaraka isika ...
Hatrany am-piandohana dia nahaliana izany, ny latabatra boribory izay niadian-kevitra momba ny lohahevitra toy ny fampidirana ny BIM sy ny Art Intelligence (AI) mihatra amin'ny GIS. Notarihin'i Martí Domènech Montagut avy amin'ny Sampan-draharaha misahana ny teknolojia sy ny serivisy misahana ny orinasa, Ilse Verly misolo tena an'i Autodesk sy Xavier Perarnau avy amin'ny SeysTic. Mihoatra noho ny mahaliana noho ny maha-zava-dehibe ity lohahevitra ity, izay manosika ny rindrambaiko sy ny orinasa mpamokatra ho an'ny Geo-engineering. Ny fahitana ny lohahevitra BIM amin'ireto karazana kaonferansa ireto, izay nifantoka tamin'ny sehatry ny geospatial, na ny BIM na ny faharanitan-tsaina ary ireo zaza kambana nomerika, dia manampy amin'ny fahitana amin'ny ho avy izay vahaolana hamorona fonosana mifameno ao anaty onja izay hampiasan'ny mpampiasa ny tsara indrindra. fitaovana, na maimaim-poana na tsy miankina fa eo ambanin'ny fomba territorial tafiditra ao amin'ny rojom-pamokarana. Ny toerana misy ny ESRI dia voamarika tokoa, amin'ny fanohizana ny fananganana fifanarahana ahafahan'ny fifandraisana teknolojia marobe, toe-javatra iray izay tsy azontsika tamin'ny BIMSummit 2019 izay vao niseho teto Barcelona, ​​izay orinasa vitsivitsy no niresaka momba ny zavatra ataon'izy ireo mba tsy hamily ny sisiny. Ny dinamika eo amin'ny sehatra eo amin'ny sehatry ny fananganana - tsingerin'ny fiainana (AECO).
Manentana ny ho avy ao amin'ny Revolisiona Industrial 4ª, ny maha-zava-dehibe ny Cloud GeoSpatial.
Taorian'ny tonga soa nataon'i Jaume Masso, Talen'ny ny Institut Cartogràfic I Niforona de Catalunya (ICGC), nanomboka mahaliana tsehatra Angeles Villaecusa - Tale Jeneraly in ESRI Espaina, izay nanapaka ny ranomandry amin'ny lahatsary mahatsikaiky izay mampiseho ny tsy fahalalana ny zavatra Tena marina, fampiasana sy fampiharana ny GIS. Ary avy tamin'ny miramirana, ny lahatsary mahatonga mazava tsara fa ny Geographic Information System dia mihoatra lavitra noho ny fitaovana ampiasaina fotsiny ny sarintany.
Ny famelabelarana mitondra ny lohateny hoe Esri GeoSpatial Cloud: Manentana ny ho avy amin'ny Revolisiona indostrialy faha-4, mikendry ny hampahafantatra ny maha-zava-dehibe ny GeoSpatial Cloud amin'ny tanjon'ny fahombiazana, fahombiazana ary fampidirana izay mampihetsika ny indostria amin'ny ankapobeny fa izany dia manamarika ny Hevitra SmartCities.
Villaescusa, nampiseho ny mpandray anjara fa misy mpanjifa ny vokatra sy serivisy ESRI any amin'ny faritra maro izay tsy mahafantatra, toy ny Ny Walt Disney Company, izay mampiasa ny GIS mba hanamboatra tanàna misy ny sarimihetsika, ka mahatonga azy ireo ho akaiky kokoa ny zava-misy marina amin'ny fampiasana angona geografika.
Raha misy efa nanendry azy ireo hahita nafana horonan-tsary, dia afaka milaza aminareo aho fa tsy fantatro ESRI avy amin'ny farany nahazoan-dalana ny sarimihetsika hoe Ny Incredibles, ka tsy fantany fa ny farany dikan-Blade Runner ESRI efa nandray anjara tamin'ny famolavolana ny sary.
Ny marina dia isan'andro ny orinasa dia mitaky ny fampiasana ny angona avy amin'ny geospatial amin'ny tetikasany, amin'ny famolavolana ny fananganana, ny fanombanana ny dindony ary ny fanaraha-maso ny fandidiana. Izany no antony tsy mahagaga intsony ny fisian'ny fisantaran'andraikitra izay nanatsara ny fitrandrahana angon-drakitra toy ny SAP na HANA, izay manodina ny masony amin'ny toerana.
Kitapo fiantohana ArcGIS News
Aitor Calero, lehiben'ny teknolojia sy fanavaozana ao amin'ny Esri - Espana, dia nanolotra izay ho avy tsy ho ela amin'ny sehatra ArcGIS. Tao anatin'ny famelabelarany, nanazava ny fomba hanomezan'ny solontena ny vinavina ho an'ny fampivondronana ny SmartCities sy ny Digital Twins ny fitaovana vaovao izay mahaforona ny ankohonana ESRI (Digital Twins).
Nanomboka tamin'ny nihazakazaka ArcGIS Hub, ohatra ny fandaminana sy ny fitantanana Urban 3D tany amin'ny sehatra ho an'ny ArcGIS, izay manohana amin'ny lafiny sasany amin'ny fananganan'anaka amin'ny dizitaly kambana. Koa dia nasehony ny cadastre fitaovana ho an'ny atitany amin'ny ArcGIS an-trano - miaraka amin'ny fitaovana io dia azo atao ny mampiasa 2D 3D sy sarintany, ary ny marina Visualizations toerany eo amin'ny fitantanana pananana.
Ankoatra izany, nanondro ny fampiharana ny fampiharana toy ny Tracker ho an'ny ArcGIS izy. Ity fitaovana farany ahafahana manara-maso ny mpiasa izay manao fanadihadiana eny an-kianja, afaka mizara ny toerana misy azy, dia afaka mahita fahitana bebe kokoa momba ny fandrakofana izay ataon'ilay olona ao amin'ilay faritra takiana. Izy io dia miasa amin'ny fitaovana amin'ny Android sy iOS, miaraka amin'ny endritsoratra tsotra ho an'ny mpampiasa, ary azo alaina ho an'ny fampiasana ivelan'ny Internet. Ity fampiharana ity koa dia ahitana fitiliana fanaraha-maso sy serivisy iray mba hitehirizana sy hitantanana ny làlana misy ny toerana; manararaotra ny toerana malalaka ao amin'ny BigData Store.
Calero, dia nanome drafitra mahaliana mahakasika ny zavatra atolotry ny ESRI amin'ity taona ity sy ireo izay tonga; Avy amin'ny Geofumadas isika no hiandry, hitsapana sy hanilika ny fahaizany.
Mampiasa ny valalabemandry mba hahazoana angon-drakitra momba ny zom-pirenena momba ny zom-pirenena - Raharaha Aparcabicibcn
Ity famelabelarana, tena voly, nataon'i Camila González, Project Manager ny Current ara-tontolo iainana, dia nampiseho ny fomba rafitra vaovao manampy hanangona angon-drakitra momba ny rafitra na ny foto-drafitrasa ara-tsosialy ny avo fiantraikany. Amin'izay fotoana izay dia nisy resaka ny bisikileta fijanonana faritra, izay, toy ny nitranga tamin'i Barcelona, ​​manan-danja maneho ny fitaovam-pitaterana, anisan'izany ny asa fanofana bisikileta.
Nanazava i Gonzáles fa azo atao tsara ny fampiharana ny fampiharana crowdsourcing, ny angona be dia be avy amin'ny tanàna. Izany dia midika ho fananganana sehatra iray misokatra ho an'ilay mpampiasa, izay afaka manatanteraka ny fanamarinana mialoha ny fampiasana ny serivisy.
Fa fanantenana kokoa feo, crowdsourcing mila fandraisana anjara goavana mpampiasa sy ny fanaraha-maso ny Fanjakana, mba ho azo antoka fanapariahana ny angon-drakitra misokatra, ary ny fanorenana sy ny mpampiasa namana fampiharana ny fitantanana. Manantena ny tetikasa mba hahatratra aseho amin'ny farany, ny sehatra na rafitra milaza fisian'ny / Visibility bisikileta fijanonana, raha ny fampiasana azo antoka, na, raha ny fanjakana no miasa; na ho an'ny fanapahan-kevitra momba ity tontolo momba ny fitaterana ity, ary ho an'ny vahaolana amin'ny mpampiasa.
Araka ny fahamendrehantsika, ny fanolorana ny valin'ny afo, ArcGIS Enterprise ho Bombers de Barcelona, ​​miala amin'ny GIS amin'ny fotoana tena izy, tarihin'ny Miquel Guilanyà. GIS Tècnic. SPEIS- Bombers de Barcelona, ​​izay nanazava tamin'ny antsipirihany hoe ahoana no ahafahana mamorona rafitra / sehatr'asa amin'ny fotoana mety, ho an'ny fisorohana sy ny valin-kafatra avy hatrany amin'ny toe-javatra na toe-javatra mampidi-doza.
Amin'ny ankapobeny, niatrika fanantenana ny hetsika, mandeha amin'ny teboka mampiseho fampahalalana mahaliana, mahaliana ny mpandray anjara; ary koa ny fivoaran'ny fifanarahana izay efa tratran'ny taona maro niaraka tamin'ireo orinasa hafa, ary ny fampisehoana tantara mahomby sy ny fanavaozana ny programa ESRI. Amin'ny maha-hetsika any Barcelone, tsy mahagaga raha maro ny taratasy ao amin'ny Catalan; miaraka amin'ireo fetra mety hahatonga izany ho an'ireo mpampiasa izay tsy miteny izany.
Previous Post«Previous Sampan-draharahan'ny tranokala efa tranainy indrindra amin'ny Manga Mapping 28-124
Next Post Amporisiho ny data CAD mankany amin'ny GIS amin'ny ArcGIS Promanaraka »